बैदेशिक रोजगार – Nepalaya Times
Jun162022 by Nepalay TimesNo Comments
साउदी अरब सडक दुर्घ'टनामा परी एक नेपाली युवाको मृ'त्यु साउदी अरबको पश्चिमी क्षेत्र जेद्दा स्थित एउटा कम्पनीमा कार्यरत युवराज राईको सडकदुर्घ'टनामा परी मृ'त्यु भएको छ। बितेको मार्च २६मा सडक दुर्घट'नामा परी जेद्दाको किङ्ग फाहाद हस्पिटलमा उपचारार्थको क्रममा रहेका उनको हिजो मृ'त्यु भएको गैरआवासीय नेपाली संघ साउदी अरबका उपाध्यक्ष भक्तबिर राईले जानकारी गराएका छन् । मलेशिया सरकारले अदालतको विवेकमा अनिवार्य मृत्युदण्ड र प्रतिस्थापन सजाय हटाउन सहमत भएको छ मलेशिया सरकारले अदालतको विवेकमा अनिवार्य मृत्युदण्ड र प्रतिस्थापन सजाय हटाउन सहमत भएको छ, वास्तविक कानून मन्त्री दतुक सेरी वान जुनैदी तुआन्कु जाफरले घोषणा गरे। उनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै खतरनाक लागुऔषध ऐन १९५२ [एक्ट २३४] को दफा ३९बी अन्तर्गत अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हुने ११ वटा कसुरमा प्रस्तावित प्रतिस्थापन सजायमा थप छान
Jun142022 by Nepalay TimesNo Comments
कुवेतमा ४४ बर्षिय यदु गुरुङको नि’धन। हार्दिक श्रद्धा’ञ्जली
कुवेतमा ४४ बर्षिय यदु गुरुङको नि'धन। हार्दिक श्रद्धा'ञ्जली आर डि क्रीएशन। २६ अप्रील, कुवेत। कुवेतमा ४४ बर्षिय गरामणी-९ झापा निवासी यदु गुरुङको उपचारको क्रममा निध'न भएको छ। मृ'तक करिब एक महिना देखि कलेजो क्यान्सर (liver cancer) को उपचाररत थिइन। उनी कुवेतमा घरेलु कामदारको रुपमा आए पनि आफ्नो स्पोन्सरबाट रिलिज लिएर लेडिज शैलुनमा काम गरिरहेकी थिइन। पछिल्लो पटक एक्का,सी पेट दु,ख्यो भनेर जाहारा स्थित जाहारा हस्पिटलमा उपचारको लागि पुगेकी गुरुङलाइ लिभर क्या,न्सर भएको भन्दै जाहारा हस्पिटलले अमिरी हस्पिटलमा रिफर गरिदिएको थियो। उनको अमिरी हस्पिटलमा उपचारकै क्रममा आज बिहान करिब ४ बजे नि'धन भएको हस्पिटल स्रोतले जनाएको छ। यस्तै,भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जजिरा एयरवेजमार्फत एक महिनामा दुई हजार सात सय ८० यात्रुले आवतजावत गरेका छन्। जेठ २ गतेबाट अन्तर्राष्ट्रिय उड
Jun42022 by Nepalay TimesNo Comments
कतारमा आफ्नै साथीले च’क्कु हानेर नेपाली युवकको ह’त्या ! हार्दिक श्र’द्धान्जली
वैदेशिक रोजगारको लागि कतार पुगेका रोल्पाका एक युवकको ह'त्या भएको छ । रोल्पा लुंग्री गाउँपालिका–५ पुरोनोबोज्याङ बडाचौरका ओमबहादुर घर्तीमगरको गत कात्तिक २८ गते ह'त्या भएको परिवारले जनाएको छ । ओमबहादुरकी पत्नी नवीनाका अनुसार कात्तिक २८ गतेदेखि श्रीमान सम्पर्कविहीन भएको र त्यसै दिन हत्या गरिएको हुनसक्ने आशं'का गरेकी छन् । घ'टनाबारे थप जानकारी पाउन र दोषीमाथि कार'वाही गर्न माग गर्दै नवीनाले काठामाडौंस्थित परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत कन्सुलर सेवा विभागमा उजु'रीसमेत दिएकी छन् । उनका अनुसार रोल्पा मिझिङ घर भएका श्रीमानसँगै एउटै कोठामा बस्दैआएका गोपाल घर्ती क्षेत्रीसँग सामान्य वि'वाद भएको र त्यसै कारणले भान्सा अलग गरेको ओमबहादुरले पहिल्यै जानकारी दिएका थिए । ‘पहिले श्रीमानसँग साथै बसेको र पछि वि'वाद भएपछि भान्सा र कोठा अलग्गै गराएको खबर गर्नुभएको थियो’ निवेदनमा उनले भनेकी छन्, ‘कात्ति
Jun22022 by Nepalay TimesNo Comments
समर्पण रम्जान, ३० जनवरी २०२२, साउदी अरब- सोलुखुम्बु घर भएर ४ महिना अगाडी मात्रै, अब्दाल सप्लाइ कम्पनी रियादमा आएका मनि कुमार बि.क ले आफ्नै बासस्थानमा आ’त्मह’त्या गरेका छन् । सप्लाइ कम्पनीमा आएका बि.क लाई कम्पनीले अर्कै रेस्टुरेन्टमा डाइनिङ् डिपार्टमेन्टमा काम लगाएको थियो । केही दिन देखि घरायसी तनाबले ग्रसित रहेका बि.क ले रेस्टुरेन्टमा काम गर्दै गर्दा गत शुक्रबार केही सामन्य स’मस्या भएपछि उक्त रेस्टुरेन्टका फिलिपिनी म्यानेजरले टर्मिनेट गर्नलाई पेपरमा साइन समेत गराएको थियो । टर्मिनेट गर्ने र लगाएको युनिफर्म पनि फिर्ता गर्न भनेपछि बि. क त’नाबमा रहेको उहाँका निकटतम साथी सुरज बिश्वकर्माले जानकारी गराए । घरायसी त’नाबले ग्रस्त बि.क लाई साथिहरुले राम्ररी सम्झाइ बुझाइ गरे पनि दोहोरो त’नाबले अन्त्यमा सनिवार बिहान ६ बजे आफ्नो देह त्याग गर्न पुगेको उनका साथीहरुले बताएका छन् । साथी सुर
May302022 by Nepalay TimesNo Comments
धनगढी : कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिका खैरीघाटका वसन्त ओड भारतको बेंगलोरमा चौकीदारीको काम गर्छन्। उनी भारतमा काम गर्न थालेको २० वर्षभन्दा बढी भयो। यो अवधिभित्र उनले नेपालमा आएर ५/६ पटक भोट हाले पनि। ‘नेताहरूले फोनका फोन गरे हजुर त्यही भएर आएको हुँ। भोट हालें, नेता जिताएँ। उनी कुर्सीमा बसेको पनि हेरें। झन्डै दुई सातापछि आज फेरि त्यही डन्डा बजाउन जाँदैछु’, निधारमा रातो टीका लगाएका उनले गौरीफन्टा बोर्डरमा भावुक हुँदै भने। वसन्तलाई बेलडाँडीका पाँच जना नेताले फोन गरेर बोलाएका थिए। उनलाई आतेजाते भाडा पनि दिने भनिएको थियो। ६/७ जनाको युवाको समूह बाँधेर उनी आए पनि। तर गाउँमा मतदान भयो, नेताहरू घरमा पटकपटक आए, भोट मागे र जिते पनि। तर, अहिले उनी आफ्नै पैसाले टिकट काटेर भारत जाँदैछन्। गाउँभरि पैसा बाँडियो भन्ने सुनेँ सर। तर, मलाई त आउने जाने टिकट पनि कसैले दिएनन्। चुनावमा भोट हाल्न आउन मन
May292022 by Nepalay TimesNo Comments
फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ५६ लाख ६५ हजार २ सय २६ पुगेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ का अनुसार यसमध्ये पुरुषको सङ्ख्या ५३ लाख ४८ हजार ८ सय १४ रहेको छ भने महिलाको सङ्ख्या ३ लाख १६ हजार ४ सय १२ रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म थप ४ लाख १२ हजार ७ सय ८७ जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागले आइतबार पनि सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । सरकारले जेठ १ गतेबाट हप्ताको दुई दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विदा दिने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । विभागका अनुसार आइतबार विहान १० बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म सेवा प्रदान गरिने जनाएको छ ।